Akụkọ - Nyocha ngwaahịa - Ndị ahịa
1. Ihe ikuku choro maka iji cylinder mee ihe: dị ọcha na akọrọ abịakọrọ ikuku ga-eji. Na ikuku ga-enweghị organic ihe mgbaze sịntetik mmanụ, nnu, corrosive gas, wdg, iji gbochie cylinder, valvụ ihe ọjọọ omume. Tupu echichi, njikọ anwụrụ kwesịrị n'ụzọ zuru ezu fụọ na saa , ewetala ájá, mgbawa, akara akpa iberibe na adịghị ọcha ndị ọzọ na cylinder, valve.
2. Chọrọ maka ojiji nke cylinder: N'ebe nwere otutu uzuzu, nkpuru mmiri na umu ogwu, uzo nkpuru kwesiri ka eji ihe mkpuchi telescopic. na ọnọdụ okpomọkụ nke ọkara gafere -10 ~ 60 ℃ na mgba ọkụ magnet, mgbochi oyi ma ọ bụ usoro mgbochi ikpo ọkụ kwesịrị iwere. Na gburugburu ebe ndọta magnet siri ike, a ga-ahọrọ silinda ahụ na akpaka na-akpaghị aka nke oghere magnet. ekwesighi iji vapors na-emebi ma obu na vapors nke na-eji mgbaaka akara akara.
3. Lubrication nke cylinders:E kwesịrị iji mmanụ alụlụ mmanụ mmanụ ejiri mmanụ mmanụ na-aga nke ọma na-enweghị mmanu mmanụ. Enwere ike iji ya ogologo oge n'ihi na tinye mmanụ griin na cylinder ahụ. A pụkwara iji ya mee ihe maka mmanụ, mana ozugbo a na-eweta mmanụ ahụ, a gaghị akwụsị mmanụ ahụ. Ekwesịrị ịnye ya mmanụ turbine mba. 1 (ISO VG32). Ejila mmanụ, mmanụ spindle, wdg, zere ịba ụba abụọ nke NBR na akàrà ndị ọzọ.
4. sịlịnda ibu: Okpu pistin na-enwe ike ịkwado ibu axial ma zere itinye ihe ndị dị n'akụkụ na nke eccentric na mkpanaka piston.Mgbe enwere transverse ibu, a ga-agbakwunye mkpanaka piston na ngwaọrụ ndu ahụ, ma ọ bụ họrọ mkpanaka mkpanaka cylinder, wdg. Ntughari uzo ibu gbanwere, ogha n'ihu piston na ibu * jiri ihe na-ese n'elu mmiri. N'ụzọ dị otú a, ọ gaghị enwe nkwụsịtụ n'ọnọdụ ọ bụla nke njem ahụ. Mgbe cylinder dị n'okpuru ike dị egwu, tebụl nrụnye nke cylinder ahụ ga-enwe usoro iji gbochie ịtọpụ, nrụrụ na mmebi.
5. Ntinye nke cylinder: Mgbe ị na-etinye silinda edozi, axis nke ibu na piston kwesịrị ịbụ otu .Mgbe ị na-etinye ihe ọkpụkpọ ma ọ bụ trunnion cylinders, gbaa mbọ hụ na ụgbọ elu nke na-ebugharị nke cylinder na ntụgharị nke ibu dị n'otu ụgbọelu.
6. Mgbanwe ọsọ ọsọ nke cylinder: Mgbe ejiri akara njikwa ọsọ iji dozie ọsọ nke cylinder ahụ, a ga-eji nwayọọ nwayọọ mepee valvụ ya na steeti mechiri emechi ma gbanwee ya na ọsọ achọrọ. Gbanwee ọnụọgụ nke ntụgharị ka ọ ghara ịgafe * ọnụ ọgụgụ ntụgharị. mkpọchi ukwu.
7. Ndọchi nke cylinder: Mgbe ike na-agagharị nke cylinder enweghị ike ịbanye na ya n'onwe ya, a ga-agbakwunye usoro nchekwa (dị ka ebe nchekwa hydraulic) ma ọ bụ aka na-echekwa n'èzí.
8. Banyere akpaka ọrụ nke cylinder:maka akụrụngwa na-arụ ọrụ akpaka, a ga-ewere ihe mgbochi na usoro ma ọ bụ sekit iji gbochie ozu ahụ na mmebi ngwaọrụ n'ihi ọrụ na-ezighi ezi na usoro ọrụ nke cylinder.Load rate: Site na nyocha nke njirimara na-agba ọsọ, na-esiri ike ịchọpụta mmepụta n'ezie nke cylinder ike. Ya mere na omumu nke oru na mmeputa nke cylinder, ejiri ihe eji eme ihe na echiche nke ibu. A na-akọwapụta ihe na-akpata sịlịnda beta dị ka beta = nkwupụta cylinder na ike nrụpụta nke ezigbo ibu F * 100% cylinder Ft (l3-5), a na-ekpebi silinda ahụ n'ezie site na ọnọdụ ọrụ ọ bụla, ọ bụrụ na enenyere ya cylinder, ibu ọnụego a kọwara site tiori nke gas cylinder nwere ike kpebisie ike, mmepụta ike, nke nwere ike gbakọọ cylinder mụụrụ. Maka ihe na-adịghị mkpa, dị ka cylinder eji na pneumatic clamping, ntinye anaghị arụpụta ike, izugbe họrọ ihe beta bụ 0,8; ọnụego dị ka ndị a: <0.65 mgbe cylinder na-agagharị na obere ọsọ, V <100 mm / s; <0.5 Mgbe cylinder ahụ na-agagharị na ọsọ ọsọ, V = 100 ~ 500mm /s; <0.35 mgbe cylinder na-agba ọsọ ọsọ , v> 500 mm / s. Ọrụ mgba ọkụ magburu onwe ya SMC: A na-ejikarị mgba ọkụ magnetik SMC eme ihe iji jikwaa mmegharị nke ígwè ọrụ mmepụta ihe, usoro mgbanwe mgbanwe nke 1: 1 ka 1: 150; Mkpokọta nha kwesịrị ekwesị maka ịgbakọta na obere oghere, ogwe ụgbọala na gear gear shaft bụ nke igwe anaghị agba nchara, ihe nkedo na draịva bushing bụ nke akpachapụrụ anya nke ihe thermoplastic, ụdị ihe niile na akụrụngwa nwere nguzogide dị mma, yana akụrụngwa ahụ nwere ezigbo ihe na-egbochi mmiri na uzuzu. ígwè ọrụ mmepụta ihe, dị ka ibuli, wdg Mgbanwe mgbanwe ahụ sitere na 1: 1 ruo 1: 9,400; A na-arụnye ngbanwe ọkọlọtọ ya na 2, 3, 4, 6, 8, 10 ma ọ bụ 12 ngwa ngwa ma ọ bụ nwayọ nwayọ ma nwayọ CAM PRSL7140PI. Ihe ndị ọzọ na oke mgbanwe dị na arịrịọ. Mee iwu pụrụ iche. * Mgbanwe mgbanwe bụ 1: 9,400. Ihe niile na akụkụ ya na-eguzogide ọgwụ, mmiri na uzuzu.